Izindaba - Isondlo sokulala
1, okokulala (ngaphandle kwama-cores), imvamisa yokuhlanza ingasuselwa emikhubeni yenhlanzeko yomuntu siqu. Ngaphambi kokuqala ukusetshenziswa, ungakwazi hashaza emanzini kanye ukugeza ebusweni uginindela futhi ukuphrinta umbala ezintantayo, kuyoba ethambile ukusebenzisa futhi mancane amathuba okuba fade lapho uhlanza esikhathini esizayo.
2, ngaphezu kwezinto ezikhethekile kakhulu nalabo abathi azikwazi ukugezwa (njengosilika), ngokuvamile, inqubo yokugeza: qala uthele okokuhlanza okungathathi hlangothi emanzini emshini wokuwasha, izinga lokushisa kwamanzi akufanele. idlule 30 ℃, ukuze ziyoncibilika okokuhlanza bese ubeka zokulala, cwilisa isikhathi asiside kakhulu. Ngenxa yokuthi ukusetshenziswa kwe-alkaline okokuhlanza noma izinga lokushisa lamanzi liphezulu kakhulu noma okokuhlanza akuncibilikisiwe ngokulinganayo noma kucwiliswe isikhathi eside kungase kubangele ukufiphala okungadingekile. Ngesikhathi esifanayo, geza imikhiqizo enombala okhanyayo ngokwehlukana nemikhiqizo enombala omnyama ukuze ugweme ukungcolisana. Uma ufuna ukusebenzisa isomisi, sicela ukhethe ukomisa izinga lokushisa eliphansi, izinga lokushisa akufanele lidlule 35 ℃, lingagwema ukuncipha ngokweqile. Izingubo zokulala zivame ukubekwa phezu kombhede ukuze abantu bazisebenzise lapho belele, okuhlanganisa okokulala, amakhava, amashidi, okombhede, oshamu, imicamelo, imicamelo, izingubo zokulala, omati namanethi omiyane; ngokuvamile, sibhekisela izingubo zokulala ikakhulukazi ibhekisela imikhiqizo yendwangu, imikhiqizo quilted kanye nemikhiqizo polyester, ngaphandle izingubo zokulala nomata.
Ngamafuphi, ngaphambi kokugeza kufanele ufunde ngokucophelela imiyalelo yokuwasha mayelana nomkhiqizo, kukhona izesekeli zokuhlobisa zomkhiqizo ngaphambi kokugeza kumele unake i-lace, i-pendant, njll kuqala isuswe ukuze ugweme umonakalo.
3. Uma uqoqa, sicela ugeze kuqala, usule kahle, ugoqe kahle, futhi ubeke inani elithile lama-mothballs (hhayi ukuthintana ngqo nomkhiqizo), bese ubeka endaweni emnyama enomswakama ophansi kanye nomoya omuhle. Imikhiqizo yesikhathi eside engasetshenzisiwe ingamiswa elangeni ngaphambi kokuba iphinde isetshenziswe ukuze iphinde ibe manzi futhi.